Waa nin Muslim ah oo la ixtiraamo oo ku soo laabtay garoomada ka dib 15 sano oo uu garoomada ka maqnaa, laakiin ciyaartiisii ​​ugu horeysay waxa ay aheyd guul inkastoo ay barbaro galeen.
Feedhyahankii caanka ahaa Mike Tyson, oo ciyaaraha ka fadhiistay 2005, ayaa ku soo noqday feedhka bishii Diseembar, habeenki sabtiga ee rajada sanadka cusub ee 2021 ayuu la legdamay Roy Jones Jr. waxayna kasbadeen malaayiin doolar.
Feeryahankan oo lagu tilmaamo inuu kamid ahaa feeryahannadii ugu miisaanka cuslaa taariikhda, ayaa qaatay diinta Islaamka kadib markii laga sii daayay xabsiga kadib markii uu qaniinay dhagta feedhka kale.
Waqti ka dib, noloshiisa waxay ku jirtay dhaqdhaqaaq, in kasta oo dhaqankiisu is beddelay, dhaqaale ahaanna wuu ku dhibtooday haddana lacag buu mar kale helaa.
Waxaa la filayaa inuu dhawaan ciyaaro feerka adduun dhan 200 milyan oo lagu qiyaasay, laakiin weli lama go’aamin cidda uu noqon doono.
Yaraantiisii, Mike Tyson wuxuu la soo kulmay nolol adag, maadaama uu ilmo yar ku ahaa jidadka Brooklyn, noloshiisana inta ugu badan ku qaatay halkaas.
TalkSport waxay dib ugu laabanaysaa yaraantiisii ​​Mike Tyson waxayna ogaatay in la xiray 38 jeer ka hor inta uusan 13 sano gaarin.
Mike Tyson wuxuu dhibaatooyinkaas la wadaagay caruurta kale ee madow ee waqtigiisa ee daryeelka helay, kuwaas oo xaafadahoodu ay kujireen liis madow isla markaana aan laga hirgalin kaabayaasha dowlada. Intaa waxaa dheer, waxaa jira takoorid.
axadle 5966 posts
Barca ayaa la soo wareegtay xiddiga Man City